ဆောင်းအိပ်မက် … | Layma's World
« ကျန်စစ်မင်း၏ မေတ္တာ … လမ်းပေါ်က … ကချေသည်… »
ဂျစ်တူး - gyit_tu, on September 12, 2007 at 6:01 pm said:
လေးမရေ.. အသဲပုံ မလိုချင်ပါ ။ သစ်လုံးအိမ်လေးပုံနော်း)
အိပ်မက်တွေကို ဖတ်သွားတယ် ။ သိပ်ကဗျာဆန်တာပဲး)
သန့်ဇော်မင်း, on September 13, 2007 at 8:11 am said:
“ဆောင်း” က ပြောတယ်…သူသိပ်ချမ်းနေတယ်တဲ့ … ။
နှင်းတွေဝေတဲ့ ဆောင်းမနက်ခင်းတစ်ခုမှာ နှင်းပွင့်လေးတွေလို မဖွေးတဲ့ … “လေးမ”ဆိုတဲ့မိန်းကလေး…လူ့ လောကကြီးထဲကို ရောက်ခဲ့တယ်…။
အဲ.. ဒါဆိုရင်တော့ မုန့်စားရတော့မယ်။ မွေးနေ့နီးနေပြီ။ တိတ်တိတ်လေး မလုပ်နဲ့နော်.. မမလေး။ 😀
အမေ (သို့ မဟုတ်) “ငွေ” အမြန်လာပါ… အဲ….. ကောင်းပ။
မက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဆောင်းတွင်းအိပ်မက်လေးက လွမ်းစရာလေးလာဟင်။… 😀
တန်ဆောင်တိုင်အိပ်မက်လေးကတော့ လန်ထွက်နေတာပဲကွာ.. မမိရေ.. ရှောင်ပေးလိုက်နော်။ 😛
အားကျတယ်ကွာ.. သူများတကာတွေများ အိမ်မက်လေးတွေ မိုက်မှမိုက်ပဲ..
pandora, on September 13, 2007 at 1:12 pm said:
ဘာရမလဲ အိပ်မက်ထဲဝင်ပြီး ကွန်မန့်ရေးသွားတာပေါ့
ပုံရိပ်, on September 14, 2007 at 3:22 am said:
naing, on September 14, 2007 at 6:20 pm said:
အနွေးထည်လေးတော့ ၀တ်ထား လို့ ။
Bayint Naung, on September 14, 2007 at 6:42 pm said:
လေးမရဲ့ တန်ဆောင်တိုင်အိပ်မက် ကို အားကြပြီး ပြန်သွားပါတယ်။
Layma, on September 15, 2007 at 11:55 am said:
မဂျစ်… ဆွဲပေးမှာပေါ့… ကဗျာဆန်သလား…မဂျစ်….။
ကိုသန့်… ၀ါးတီးမက်တယ်လို့ ပြောတော့လဲ အပြောမခံချင်ဘူး…ဟင်း…၂၀၀၈ မှစားရမှာနော်…စောင့်ဦး…။ လန်ထွက်နေတဲ့ အလွမ်းလေးတွေကို အားကျရင် အိပ်မက်မက်လိုက်ပါ….။
မပန်…တော်ပါသေးရဲ့…ကွန်မန့် ပဲရေးသွားလို့ ….။
မပုံရိပ် … ဟုတ်တယ်…လွမ်းလို့ လွမ်းစရာတွေရေးတာ…ဟိ…။
ကိုနိုင်… အစိမ်းကပြောတယ်…လေလဲတိုက် နေလဲထွက်လို့… ထူပြီးပါးတဲ့ ၀တ်ရုံခြုံထားသတဲ့…။
ကိုဘုရင့်နောင်….အားကျရင် ပြေးချည်းပဲပြေးမနေနဲ့ လေ….ကြိုးစားမှပေါ့…။
ပေါက်ပေါက်ဆုပ်, on September 16, 2007 at 3:08 am said:
အားရား … မလေးဆောင်းလေးက အရမ်းပျော်စရာကောင်းတာပဲ အားကျလိုက်တာာာာာ
ပေါက်ပေါက်ဆုပ်ကိုလဲ စမူဆာနဲ့ပေါက်နော် တူငယ်ဂျင်းတွေဖြစ်တွားအောင်လို့ ( ချားပီးတာ စမူဆာနဲ့တော့ ပေါက်နဲ့နော် ) ခွိခွိ 😛
eithu, on September 16, 2007 at 4:23 pm said:
နွေရာသီ ..မိုးရာသီလေးတွေရော ဟင်..
နွေဦးရာသီ ..ကိုကြိုက်တယ် ..^.^
Layma, on September 17, 2007 at 10:13 am said:
ပေါက်ပေါက်ဆုပ်….ကိုတော့ ဆမူဆာနဲ့ ပေါက်ဘူး… ဘာဂါနဲ့ ပေါက်မယ်..ကြိုက်လား…။ 
မအိ…. မိုးရာသီလေးလဲရေးဖူးတယ် မအိရဲ့…။ နွေကတော့ ရေးချင်နေတယ်…“လွမ်းရိပ်ဝေသော နွေဦးညများမှာ….” လို့ …။ 
eithu, on September 17, 2007 at 11:38 pm said:
`မိုးတွေရွာရင်…. ` ဆိုတဲ့ post ဟုတ်တယ်ဟုတ်. .
အားပေးလျက်ပါ.. ဆက်ရေးနော် ..
“လွမ်းရိပ်ဝေသော နွေဦးညများမှာ….” ကိုစောင့်နေမယ် ..
ပြောယင်းနဲ့ ဆယ်တန်းတုန်းက “နွေဦးကာလမြူထသောအခါ” ကဗျာကိုတောင်သတိရမိသား..
အိုး .. ဆောင်းရာသီကို နှောက်ယှက်မိတဲ့အတွက် ဆောရီ :p
Layma, on September 20, 2007 at 2:58 pm said:
မအိ… အဟောင်းလေးရှာဖတ်သွားတာကျေးဇူးပါရှင် …။ နောက်တမိုးရှိသေးတယ် မအိရဲ့ … ။ နွေဦးကာလဖုန်ထသောခါ ထန်းရည်သောက်ချင်တယ် နော် …။ ဆောင်းက ရပါတယ်တဲ့ …နှောက်ယှက်တယ်မထင်ပါဘူးတဲ့ …။
Jerry, on September 20, 2007 at 3:20 pm said:
လွမ်းစရာကောင်းတဲ့ဆောင်း ၊ ကဗျာဆန်တဲ့ဆောင်းပဲဗျ ။ ခုတော့ ရန်ကုန်သူတစ်ယောက် ရန်ကုန်က ဘုရားစူး ဆောင်းနဲ့ပဲ တိုးလို့ လေအေးစက်တပ်အခန်းထဲက ဆောင်းအတုလေးနဲ့ပဲ နေရင်း အတိတ်ဆောင်းမှာ ကွေးနေရတော့မှာပဲနော် ။ ဟား ဟား ဟား ။။။ တနားပါတယ်ကွယ် ။။။ 😦
Layma, on September 20, 2007 at 4:45 pm said:
ဆောင်းအစစ်လေးနဲ့ဆို အနွေးထည်ဖိုးကုန်မယ့်သူတွေကိုလဲ တနားပါတယ်ကွယ်…။
Layma’s Virtual World » Blog Archive » Got Married, on June 2, 2008 at 11:17 am said:
[…] ဘော်ဘော်တွေ စသွားတဲ့ ကောင်းကင် … ၊ “တန်ဆောင်တိုင်အိပ်မက်” ကိုအတူမက်ခဲ့တဲ့ ကောင်းကင် […]